कसले मिलाउँदै छन् पारस र हिमानीलाई ? - Himalayan Kangaroo
कसले मिलाउँदै छन् पारस र हिमानीलाई ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १७ आश्विन २०७३, सोमबार ०५:३६ |
काठमाडौं । पूर्व युवराज पारस शाह थाइल्याण्डतिर बरालिएपछि पत्नी हिमानी शाहसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर हिमानीको ४० औं जन्मोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै जनाबीच फेरि निकटको सम्बन्ध देखिएपछि पति पत्नीबीचको सम्बन्धमा फेरि सुधार भएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
थाइल्यान्ड छोडेपछि पारस अझै पनि आफ्ना आमाबाबु र श्रीमती बस्ने निर्मल निवासमा बस्दैनन् । उनी आफ्नी बहिनीहरूसँग रहने गरेका छन् । उनी कहिले काका स्व. धीरेन्द्रका छोरीहरूको स्वामित्व रहेको जीवनकुञ्जमा बस्छन् भने कहिले सुनाकोठीस्थित महलमा धीरेन्द्रकी माइली छोरी शिताष्माको परिवारसँग बस्छन् । उनको आनीबानी सुधार्न अहिले धीरेन्द्रका छोरीहरुले गर्नुसम्म प्रयत्न गरिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा उनी पहिलेजस्तो डिस्को जाँदैनन् । बरू अहिले उनले आफ्ना स्कुले जीवनका साथीहरु भेट्दै हिँडिरहेका छन्। अघिल्लो महिना मात्र केही साथीहरुसहित उनी पोखरा घुमघाममा पुगेका थिए ।
धीरेन्द्रका तीन छोरीहरु जसले पारस र हिमानीको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरिरहेका छन्,त्यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पनि चाहना लुकेको छ । उनी चाहन्छन्, छोराका कारण आफ्नो परिवारको बदनामी नहोस् । त्यसैले धीरेन्द्रको निधनपछि आफूले नै अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका ज्ञानेन्द्रले धीरेन्द्रका छोरीहरुलाई पारस र हिमानीको सम्बन्ध सुधार्न आग्रह गरेका हुन् ।
धीरेन्द्रका छोरीहरु हिमानीको चाहनामा खुलेको हिमानी ट्रस्टका हर्ताकर्ता हुन् । र, उनीहरुको सम्बन्ध हिमानीसँग पनि त्यत्तिकै निकट र विश्वासशिलो रहेको बताइन्छ।
Previousअष्ट्रेलियामा काम चाहियो ? यहाँ जानुहोस् !
Nextराप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह गाई खोसिने
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ११:१२
मोटोपन घटाउनको लागि अपनाउनुहोस् यस्तो डाइट प्लान
३२ असार २०७५, सोमबार ०९:०८
सिड्नीमा नेपाली समुदायको आफ्नै कलेज
४ श्रावण २०७२, सोमबार ०२:०३